Tsipy kanetibe :: Hampifaninana tanora maimaim- poana ny PAC Ampitatafika • AoRaha
Tsipy kanetibe Hampifaninana tanora maimaim- poana ny PAC Ampitatafika
Hanokana fifaninanana ho an’ireo tanora latsaky ny 15 sy latsaky 17 taona na «Orange Kanety B», eny Ampitatafika, ny klioba PAC manomboka amin’ny alakamisy ho avy izao. Hizara roa ny hetsika. Ny dingan’ny fifanintsanana no hotanterahina manomboka rahampitso. Natao ho an’olon-droa miaraka ny fihaonana ka isan’andro dia hisy mpandresy hatrany mandritra ny efatra andro. Ireo valo voalohany isaky ny fifanintsanana indray no hiatrika ny dingan’ny famaranana, amin’ny sabotsy 23 aogositra hatramin’ny alahady 24 aogositra. Hanampy an’ireo ekipana olon-droa miaraka roa amby telopolo ireo ny ekipa avy any amin’ny faritra, izay hanana ny fifanintsanana ho azy ihany koa.
«Hisy hatrany ny fiara natokana ho an’ireo mpilalao hamonjy an’Ampitatafika, mandritra ny hetsika. Miainga amin’ny 6ora sy sasany, eny amin’ny CBT Mahamasina izany isan’andro, avy eo miverina eny amin’ny hariva, aorian’ny fiafaran’ny lalao », araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny klioba PAC Ampitatafika.
Kanetibe marika « Obut » sy finday avo lenta no hatolotra ho an’ny ekipa mitana ny laharana voalohany isaky ny dingan’ny fifanintsanana. Hahazo ny amboara sy fankasitrahana manokana avy amin’ny mpikarakara sy ny mpanohana kosa ny mpandresy amin’ny dingan’ny famaranana.
Baolina kitra- Eoropa :: Hofidiana amin’i Ronaldo, Messi, Van Djik, ny mpilalao mendrika indrindra